२०२२ मा आफ्नो हलिउड प्रोजेक्ट घोषणा गर्दै आलिया भट्ट! « News24 : Premium News Channel
२०२२ मा आफ्नो हलिउड प्रोजेक्ट घोषणा गर्दै आलिया भट्ट!
काठमाडौं । आलिया भट्ट बलिउड उद्योगको सबै भन्दा ट्यालेन्टेड अभिनेत्रीहरुमध्ये एक हुन् । ‘राजी’, ‘डियर जिन्दगी’, ‘कपूर एण्ड सन्स’, ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’लगायतका सुपरहिट फिल्ममा काम गरिसकेकी आलिया भट्ट आफ्नो पर्सनल लाइफका कारण सँधै चर्चामा रहँदै आएकी छन् ।